Thursday May 14, 2015 - 22:42:57 in Wararka by Web Admin
Markii Hanad ka soo degay baabuurkii, oo Nageeye ay is maca salaameeyeen, ma jirin, Hanad meel u asteysan inuu aado iyo meel u qorsheysnaydba. Xaalku waa meeshii Soomaalidu ka odhan jirtay, marka Awrka rareyda ah Jilaalkii oo dhan, lagu dhaansado, la
Markii Hanad ka soo degay baabuurkii, oo Nageeye ay is maca salaameeyeen, ma jirin, Hanad meel u asteysan inuu aado iyo meel u qorsheysnaydba. Xaalku waa meeshii Soomaalidu ka odhan jirtay, marka Awrka rareyda ah Jilaalkii oo dhan, lagu dhaansado, lagu guuro, ayaa marka gu'gu da'o dabarka laga furaa, seetada lugtana oogu duubaa, waxaana jira halkudheg caanbaxay oo la yidhaahdo: "Madooboow miro!" Hanad xaalkiisu waa sidii oo kale,. Nageeye kuma qaldana inuu waddada ku sii daayo, waayo, xaalkisu waa tiisaba daryeelaa tu kale ku dara. Hubaal inuu caawiyey, welibana uu ka ballanqaaday inuu xidhiidhiyo, intaas ka badana uma qabankaro.
"Waryaa, hay sheegin!” Hanadoo u musuusuqayey inuu la hadlo ayaa yidhi:
"Ku sheegi maayee, adna, wax mayga siinaysaa?” Dooli ayaa aad ugu farxay hadalkiisa, wuxuuna weydiiyey:
"Ma cusubtahay?” markaasuu Hanadna ugu jawaabay:
"Haa, waan cusubahay” wareysi dheer iyo isbarasho ka dib, waxay Doolli iyo Dalmar oggaadeen inuusan cid ku lahayn magaalada, oo iyagoo kale yahay, waana soo dhaweeyeen, sidaasayna ku noqdeen nolol wadaag.
"Noo haay” oo intuu labadii kalena u yeedhay ayey go’aansadeen inay dhar wanaagsan ku gataan, cunto wanaagsanna ku cunaan. Sidoo kale, waxay isku dhaarsadeen afartooduba; Samatar, Hanad, Cumar oo loo yaqaan Doolli iyo Dalmarba inay walaaloobaan, dhib iyo dheefna qaybsadaan, weliba Hanad ayaa soo jeediyey in Samatar ka yar yahay, oo ay dhaqaaleeyaan.
"Sidaa maanta Samatar sameeyey nin weliba wuxuu soo helo, waa wada leennahay” arrintani qof walba gaarkiisa ayay u faraxgelisay, ma jiro, dunida qof keligii isku filan oo wehel la’aan noolaanaya, heshiiskaas ka dibna waxaa noloshoodu ahayd mid isku tolan.
"Ma sidan ayaad diin iyo bani Aadminnimo ku sheeganaysaan?” wuxuu ka furfuray xadhigii, wuxuuna siiyey biyo iyo cunto, ka dib ayuu wareystay, markuu xaaladdiisa ogaadayna, wuxuu siiyey hilibkii laga reebay iyo ka badan.
08/08/2015 - 00:03:41
11/02/2015 - 12:56:41